Isgaarsiinta ee Maraykanka | USAHello | USAHello
Communication waa sida aan u wadaagno macluumaadka iyo fikradaha dadka kale. Waxaan sidaas u sameynaa by hadlaya, by qoraal ah, iyo xataa annagoo gacmahayaga, wejigaaga, iyo hay'adaha. In dal cusub, waxaan u baahan nahay si ay u bartaan habab cusub oo xidhiidhka. Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah talooyin si ay kaaga caawiso isgaadhsiin ee USA.
Inta lagu jiro bilood ee ugu horeysay ee USA aad, waxaa jiri doona marar badan marka aadan fahmin dadka iyo xaaladaha. Tani waa mid aad u adag, laakiin sidoo kale waa caadi. ma isku dayaan in ay la niyad jabin! Isgaarsiinta fiicnaan doontaa waqti. Waxaad heli doontaa used dhaqanka cusub oo ay bilaabaan in ay fahmaan luuqadda.
Markii aad timaado dal cusub, ma uu garanaynin afka ka dhigaysa wax walba oo adag. Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah wax wanaagsan in la ogaado oo ku saabsan xidhiidhka Maraykanka.
Inta lagu jiro dhowrkii bilood ee ugu horreysa aad ku sugan tahay Maraykanka, laga yaabaa inaad fahmi doonaa waxyaabo badan oo. Tani waa caadi oo ma adiga qaladkaaga. Isku day inaad aad ugu fiican inay wax wanaagsan - haddii uu qof u muuqataa qallafsan ama macnaheedu, xusuusinayaa in waxa laga yaabaa sababtoo ah kala duwanaansho dhaqameed. Ha u qaadan inay yihiin qof xun ama fiicnayn.
Haddii aadan fahmin wax ay kugu yidhi, weydii qofka inuu ku celiyo waxa ay sheegay in. Ama weydii inay ka badan si fudud mar kale ku odhan. Ha ka baqin inaad xajisaan weydiinaya.
Dad badan oo Maraykan ah oo xasaasi ah oo ku saabsan maadooyinka qaarkood. Tusaale ahaan:
• Waxaa laga yaabaa inay “siyaasad sax ah.” In hab siyaasad sax ah oo isku dayaya in aan wax in xumayn maayo koox gaar ah oo dad ah. Tusaale ahaan, badan oo Maraykan ah ma u dulqaadan kaftanka cunsuri ama xaqiraad. sax Tani waxay ka caawisaa in la abuuro bulsho loo dhan yahay. Laakiin waxay taasi keeni doontaa dhibaato haddii kuwa kale ay yihiin ixtiraam.
• Dadka Maraykanka badidoodu ma jecla in ay ka hadlaan ay miisaanka, da'dooda, ama inta lacag ee ay sameeyaan. Haddii aad wax ku saabsan qof miisaan, sida jir ay yihiin, ama sida hodan yihiin ama faqiir ay yihiin, waxay u dhawdahay inay xanaaqsan.
• Dadka ayaa sidoo kale laga yaabaa in aan doonayaa in aan kuu sheego meesha ay u socdaan ama ay ku nool yihiin. Haddii aad weydiiso qof, “Xaggee baad u socotaa?” waxay u malayn kartaa inaad leedahay ujeeddo xun.
Waxaa jira qaar ka mid ah mawduucyo si sahlan in ay ka hadlaan oo aan dhibaato isgaarsiinta a. meelaha la wadaago dhaqamada kala duwan yihiin carruurta iyo isboortiga. Haddii aad haysato waqti adag la hadasho qof, ka hadlaan mawduucyadan!
Dadka Maraykanka badidoodu hadli doonaa “hadal yar” aad la. Waxay ku weydiin doonaan sidee tahay ama la hadal ku saabsan cimilada. Tani waxaa loo arkaa edeb. Haddii qof, “Sidee tahay?” qofka kale had iyo jeer sheegay,”Good,” “Fine,” ama “OK,” xataa haddii uu isagu ama iyadu waa murugo ama xanuunsan.
Farxin iyo aad ugu mahad naqayaa
In USA, dadka ku odhan “fadlan” marka ay weydiiso wax iyo “mahadsanid” marka ay wax hesho ama qof ka caawineysaa. Americans u muuqdaan in ay mahad dadka kale xataa wax yar. Haddii qof heysta albaab furan kuu, waa edeb u mahadcelinayaa. Haddii uu qof ku siinayaa hadiyad, waa in aad sidoo kale idinku mahadnaqayaa.
Luqadda Ingiriiska luqadda labaad
Learning English waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee aad samayn karto si ay kaaga caawiyaan inaad la qabsato nolosha Maraykanka. Haddii aadan ku hadli karin Ingriiska, waxaad ka heli kartaa fasalada free online iyo bulshadaada. Waxaad ka heli kartaa siyaabo in bartaan Ingiriisi online ama in bulshada degaanka.
Mid ka mid ah hababka ugu fiican ee si aad u barato luqad cusub waa in aad naftaada quusin ku sugan iyo in ay maqlaan in badan oo. Isku day inaad dhagaysato oo aad ku dhaqmaan Ingiriisi sida ugu badan ee aad awoodid. ku dhawaaqida, ama isagoo leh wax sax ah, waa mid ka mid ah qaybaha ugu adag ee barashada luqad cusub. Your midab iyo ereyada sidoo kale aad tilmaami arrinta. laga yaabaa in aad dareento wareer, sababtoo ah waxaad leedahay wax sax ah, laakiin ma Americans aad fahmi karto. Ma aha oo dhan Maraykanka waxaa loo isticmaalaa in Lahjadda shisheeye.
Marka aynu nahay in wada hadalka dadka kale, waxaan xiriiro laba siyaabood oo muhiim ah: hadal (isticmaalaya erayo) iyo nonverbally. isgaarsiinta Nonverbal ka dhigan tahay sida aan u jidhkeenna isticmaalnaa gudbinta. Waxaa ka mid ah:
Dhehana (sidee baynu u taagnaanaynaa ama ku fadhiisan)
dadka qaar ayaa u malaynaya isgaarsiinta odhaah ka muhiimsan yahay erayada dhabta ah aynu nidhaahno. Waxay ka caawisaa dadka go'aansato haddii ay jecel yihiin iyo kuwa kale oo isku halleeya.
dhaqamada kala duwan u isticmaalaan noocyada kala duwan ee isgaarsiinta odhaah. Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah siyaabaha Americans isticmaalaan isgaarsiinta odhaah:
Dadka Maraykanka badidoodu xidhiidh indho marka aad wada hadalka muhiim ah. Haddii aadan dhigi xiriirka indhaha, dadka waxay u maleynayaan inaad been ama wax qaldan yihiin. Dadka si toos ah eegto indhahaaga waxaa inta badan u arkaan sida lagu kalsoonaan karo oo dheeraad ah, caaqil, iyo nooca. Haddii aad ka dhaqan yimaadaan halkaas oo ay dadku ma fiirin galay indhaha kasta oo kale ee, waxaase laga yaabaa in aad u adag tahay in aad samayso.
Americans ilka badan in ay edeb iyo si ay u muujiyaan wax walba waa okay. Marka aad la kulanto qof cusub, ay ka filayaan in aad iftiimisid iyaga at.
Haddii aad si toos ah u istaagaan, dadka u muuqdaan in ay ku siin ixtiraam dheeraad ah.
Dadka Maraykanka badidoodu gacan qaado marka ay ku kulmaan. Mararka qaarkood dadka aaddey doonaa mid kasta oo kale oo haddii ay mar horeba is aqoon. Haddii aad dareento gacmaha ruxaya raaxo, Qasab ma aha in aad gacan.
In USA, dadka ka sii “meel gaarka ah.” Taas macnaheedu waxa weeye haddii aad la hadasho qof, waxay u badan tahay istaagi doonaa ugu yaraan cagta ah oo kaa Jeedsan.
Dadka oo dalka Mareykanka ah waxaa la baraa in “istaag” waayo, waxay aaminsan yihiin. Taas macnaheedu waxa weeye haddii qof diidan in aad la, Waxaa laga yaabaa in ay idin kula doodaan in ay isku dayaan si ay u caddeeyaan dhibic. Tani waxay noqon kartaa mid aad u raaxo haddii aad ka dhaqan in la qiimeeyo iman “badbaadinta wajiga.” Wadamada qaarkood, is geliyey muran macnaheedu waxaa laga yaabaa inaad wajiga ayaa laga badiyay.
Americans ka Doodin baxay oo xanaaq ah ama si ay ula dagaalamaan, laakiin si aan idiin tuso sababta ay u aamminsan ay sax yihiin. Murankii waxaa guud ahaan la aqbalay oo qayb ka ah wadahadalka, haddii aad ku hadla aad u qaylo (qeyliyo) ama isticmaalka luqad xun ama edeb. Ardayda waxaa loo ogol yahay iyo xataa lagu dhiirigelinayaa in ay khilaafsan tahay macalimiinta. Carruurta waxaa laga yaabaa in waalidka ay ku doodayaan. Shaqaalaha raacsanayn karaan madaxda ay, laakiin edeb leh. Mararka qaarkood, gaar ahaan siyaasadda American, dadka ku doodi aad u badan in aan waxba la isu samayn karaa!
Haddii aad dareento raaxo in muran, caadi tahay si ay u sharxaan in aad dareento raaxo Murankii. Si kastaba ha ahaatee, Waxaa laga yaabaa in aad u baahan tahay si ay u bartaan si ay dadka oo aad iyaga la diiddan tahay sheeg haddii kale ay la tahay laga yaabo in aad raacsan tahay wixii ay ku odhan.
Mid ka mid ah qayb ka mid ah isgaarsiinta in uu noqon karaa mid aad u adag marka aad la qabsado dhaqanka cusub waa kaftan. laga yaabaa kaftan ah in dadka ku nool fahmi weydo inaad u samaysaa. Ama qof kaftan in aad fahmi weydo dhigo. Tan iyo kaftan waa dhaqanka, mararka qaar xitaa haddii aad fahmi kaftan ah, waxaad laga yaabaa in aan u maleyso inay tahay funny.
Dad badan oo Maraykan jeclahay in aan u sheego kaftanka. Mararka qaarkood, kaftanka noqon kartaa funny iyo qof kasta oo ku qoslaa. Mararka qaarkood, kaftanka noqon kartaa weerar. Tusaale ahaan, laga yaabaa in qof kaftan sheegi ku salaysan jinsiyad ama jinsiga. Dadkani iyo kaftanka ma aha siyaasad sax ah! Haddii qof kaftan ah in aad dulmiyaan sheegayaa, aad si edeb leh u odhan kartaa in aad u arkaan in ay weerar ama ixtiraam iyo iyaga ma weydiisan inuu kuu sheego wax kaftanka badan oo noocaas ah.
Xoriyadda hadalka waxaa ilaalinaya dastuurka Maraykanka. Taas aawadeed, warbaahinta Maraykanka ka dhigi kara kaftanka ku saabsan waxyaabo laga yaabo in dadka ku nool wadamada kale ee aan qoslay ku saabsan. Tusaale ahaan, waxaa jira qaar ka mid ah wargeysyada dalka Maraykanka in ay yihiin “kaftan” wargeysyada - oo ay qoraan news in uu yahay garneel ama funny, laakiin run ma. Tusaale ahaan, waraaqaha wargeyska garneel a US loo yaqaan basasha qoray sheeko ku saabsan Madaxweynaha North Korea. Waxay sheegay in uu u codeeyay ninka ugu qurxoon adduunka. Dadka qaarkood ee North Korea iyo China u maleeyeen sheeko run buu ahaa. Laakiin sheekada ahaa kaliya kaftan ah.
In USA, dadka qaar waxay jecel yihiin inay daawadaan telefishanka majaajilooyin. Waxa kale oo ay jecel yihiin oo laga yaabo in ay daawadaan majaajilaystayaal xirfadeed on TV ama in tiyaatarada iyo kooxaha. Mararka qaarkood, majaajilooyin American iyo majaajilaystayaal noqon kartaa weerar.
dheel dheel ah
Americans qaarkood waxay jecel yihiin in ay midba midka kale trick. In America, waxaa jira fasaxa ah oo lagu magacaabo April Nacasyadu’ Day. Waa maalintii ugu horeysay ee April. On maanta, dad badan oo jecel yihiin in ay isku dayaan in ay ciyaari tricks. Tusaale ahaan, qof shaqada ka dhigo mid aad aaminsan tahay wax run yahay marka ma aha. Dadka wac kaftanka kuwan “dheel dheel ah” ama “jiidaya lugtaada.”
Qandaraasyada iyo heshiisyada
In Maraykanka, heshiiska ku qoran oo heshiis afka ah waa muhiim.
Heshiisyada waa caadi afka ah. Tusaale ahaan, qofka ayaa laga yaabaa inuu ku weydiiyo inaad wax ka qaban oo idinku waxaad odhan haa ama maya. Tani waa heshiis. In America, heshiis afka ah waxaa guud ahaan loo qaaday si aad u daran. Mararka qaarkood, marka aad heshiis afka ah, Waxa kale oo laga yaabaa in aad gacan. Salaanta gacmaha waxa ay calaamad u yihiin in aad labada socday si ay u gutaan heshiiska.
Mid ka mid ah dhibaatada la heshiis afka ah waa in mararka qaar dadka fahmi kara. Tusaale ahaan, laga yaabaa inaad heshiis afka ah la qof in aad iyaga ka hor tago doonaa 5 maalintaas pm. Laakiin, waxaa laga yaabaa in ay fahmay oo u maleeyey in aad loogu talagalay maalinta ku xigta.
Haddii aad ogolaato inaad wax, waxaa muhiim ah in Americans in aad sidoo kale soo dhalaasho heshiiskii in ama in aad ha ogaadeen ma waxaad buuxin kartaa heshiiska. Tani waa run xitaa wax yar. Tusaale ahaan, haddii qof aad weydiiyo in ay qadada oo idinku waxaad odhan haa, waa in aad sidoo kale u tag qadada ama waa in aad iyaga ugu yeedho oo u sheeg ma aad iman kartaa ka hor, waa wakhti loogu talagalay qadada.
Heshiiska waxaa heshiisyo sheeg waxa ku qoran laba (ama ka badan) dadka ku heshiiyaan in ay. Marka aad u guurto guri aad saxiixdo heshiiska kirada. Marka aad bilowdo shaqo, Waxaa laga yaabaa in aad hesho heshiiska shaqada. Haddii aad soo iibsato baabuur on credit, laga yaabaa in aad saxiixdo heshiis amaah ah. Dhamaan kuwani waa qandaraasyo.
Haddii aad saxiixdo heshiis, aad u badan tahay waajib sharci ah si ay u gutaan heshiis in. Sidaas darteed waa mid aad u muhiim ah in aad si taxadar leh u akhri. Haddii heshiiska waa in English, laga yaabaa in aad rabto in aad weydiiso caawimaad u tarjumida. Wixii heshiis fudud, waxaad weydiisan kartaa saaxiib ama aad awoodid email noogu oo waxaan isku dayi doonaa inuu kaa caawiyo inaad fahamto heshiiska. Haddii ay ku saabsan tahay lacag, shaqada, ama adeegyada sharciga, laga yaabaa in aad rabto in aad isticmaasho turjumaan xirfadle ama weydii shaqaalahaaga bulshada talo.